Uma ufuna ukuqoqa idatha ku age digital, kudingeka uqaphele ukuthi wena ancintisanayo isikhathi abantu kanye ukunakwa. Lesi isikhathi sabo, bezinaka Liyindawo zitho azibalulekile yini kuwena; kuba izinto ezasetshenziselwa ucwaningo lwakho. Ososayensi abaningi social zijwayele ukuklama lokucwaninga imiphakathi kuqhathaniswa abathunjiweyo, ezifana undergraduates ku campus Labs. Kulezi izilungiselelo, izidingo umcwaningi linqobe, nokujabulela kwababambe iqhaza akuyona ebaluleke kakhulu. Ocwaningweni age digital le ndlela akuyona esimeme. Ngokuvamile Abahlanganyeli kukhona ezikude ngokomzimba abacwaningi kanye nokuxhumana phakathi kwale mililo emibili ivame ayengumlamuleli ikhompyutha. Lokhu kulungiselelwa kusho ukuthi abacwaningi uphazanyiswa kwababambiqhaza ngakhoke kumele udale kujabulise kakhudlwana umhlanganyeli isipiliyoni. Yingakho esahlukweni ngasinye okwakuhilela kucocisana abahlanganyeli, sabona amasampula izifundo ukuthi wathatha ndlela umhlanganyeli kwesakhe iqoqo idatha.
Ngokwesibonelo, eSahlukweni 3, sabona ukuthi Sharad Goel, Winter Mason, futhi Duncan Watts (2010) wadala umdlalo esibizwa Friendsense ukuthi empeleni luhlaka ohlakaniphile eduze inhlolovo sengqondo. ESahlukweni 4, sabona ukuthi ungakha zero nedatha yezindleko okuguquguqukayo by ukuklama ukuhlolwa abantu abasifunayo lesi ukuba ibe, ezifana umculo ukulandwa ukuhlola Ngazakhela noPetru Dodds kanye Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ekugcineni, eSahlukweni 5, sabona indlela Galaxy Zoo wadala a ukusebenzisana mass bashukunyiswa abantu abangaphezu kuka-100,000 ukuze uhlanganyele yezinkanyezi (kuzo zombili izinzwa izwi) image kophawu Umsebenti (Lintott et al. 2011) . In ngasinye salezi zimo, abacwaningi wagxila ekwakheni nakho okuhle abahlanganyeli, futhi esimweni ngasinye, le ndlela umhlanganyeli kwesakhe zazisiza izinhlobo omusha wocwaningo.
Ngilindele esikhathini esizayo, abacwaningi sizoqhubeka ukuthuthukisa izindlela iqoqo idatha ukuthi balwela ukwakha nakho okuhle umsebenzisi. Khumbula, in the age digital, ababambiqhaza bakho okukodwa kude ividiyo inja namabhodi okushibilika.